फ्रान लेबोविट्ज: न्यूयोर्कको स्वर्ण युगको व्यंग्यात्मक आवाज | समाचार साहित्य
जुआन अर्टिज | | जीवनी, किताबहरु, कथाहरू
Fran Lebowitz उद्धरण
फ्रान लेबोविट्ज एक अमेरिकी लेखक हुन् जसले आफ्नो पहिलो पुस्तकको प्रकाशनको साथ सत्तरीको दशकको उत्तरार्धमा उभिए: महानगरीय जीवन (१९७८)। यसमा उनले न्यूयोर्क समाजको दैनिक जीवनको मजाक बनाएका छन्। उनको अपमानजनक व्यक्तित्वले उनलाई भीडबाट अलग बनायो। उनको अनौठो तरीकाको लागि धन्यवाद, धेरै लेखकहरूले उनको इतिहासकार र हास्यकार डोरोथी पार्करसँग तुलना गर्छन्।
XNUMX देखि यो "लेखकको ब्लक" बाट पीडित छ। उनको अन्तिम सिर्जना बाल खेल थियो श्री चास र लिसा सुले पाण्डाहरूलाई भेटे (१९९४)। तर, यसले उनको दैनिक काममा रोक लगाएको छैन । लेबोविट्जले टेलिभिजन र फिल्म जस्ता अन्य क्षेत्रहरूमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्, किनकि, लेखक हुनुको अलावा, उनी एक हास्य कलाकार, पत्रकार र वक्ता हुन्।। 2007 मा, उनले पत्रिका नामांकन प्राप्त गरे वैनिटी वर्षको सबैभन्दा सुन्दर महिला मध्ये एकको रूपमा।
1 लेखक को जीवनी सारांश
1.2 साहित्यिक कार्यहरू
1.3 लेखकको लक
1.5 अडियोभिजुअल मिडियामा काम गर्नुहोस्
1.7 प्राविधिक प्रतिरोध र यात्रा
2 Fran Lebowitz पुस्तकहरू
2.1 महानगरीय जीवन (1978)
2.2 सामाजिक अध्ययन (१९८१)
2.3 फ्रान लेबोविट्ज रिडर (१९९४)
2.4 मिस्टर चास र लिसा सु मिट द पाण्डा (१९९४)
फ्रान्सिस एन लेबोविट्जको जन्म शुक्रबार अक्टोबर २७, १९५० मा न्यू जर्सीको मोरिसटाउन सहरमा भएको थियो। उहाँ आफ्नो गृहनगरमा, यहूदीहरूको अभ्यास गर्ने पारिवारिक वातावरणमा हुर्कनुभयो। उनी एक कठिन र विद्रोही युवती थिइन्, यस कारणले गर्दा उनलाई एपिस्कोपल स्कूलबाट निष्कासित गरियो उनलाई "सामान्य शत्रुता" को आरोप लगाउँदै।
पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेपछि विभिन्न ट्रेडमा काम गर्न थाले । उनले बेल्ट बेचे, ट्याक्सी ड्राइभर थिए र अपार्टमेन्ट पनि सफा गरे। उनको पहिलो महत्त्वपूर्ण काम पत्रिकाको विज्ञापन स्पेस बिक्री क्षेत्रमा थियो परिवर्तनहरू। यस पत्रिकामा उनले आफ्नो पहिलो लेखन प्रकाशित गरे, साथै, उनले पुस्तक र चलचित्र समीक्षाहरू सुरु गरे।
केहि समय पछि, एन्डी वारहोलले उनलाई स्तम्भकारको रूपमा नियुक्त गरे अन्तर्वार्ता. पछि, उनले अमेरिकी नारीवादी पत्रिकामा एक सिजनको लागि काम गरे Mademoiselle।
1978 मा उहाँले आफ्नो पहिलो पुस्तक प्रकाशित: महानगरीय जीवन, जुन यसको सुरुवात देखि एक बेस्टसेलर थियो। तीन वर्ष पछि, दोस्रो काम संग, सामाजिक अध्ययन (1981), पाठकहरु बाट एउटै स्वागत थियो। दुबै पाठहरूसँग बिक्रीमा पहिलो स्थानहरू कब्जा गरेपछि, धेरै निर्देशकहरूले उनलाई सिनेमामा अनुकूलन गर्न ठूलो रकम प्रस्ताव गरे, तथापि, उनले सबै प्रस्तावहरू अस्वीकार गरिन्।
तेह्र वर्षपछि दुबै प्रतिहरू सम्पादन र प्रकाशित गरीएको थियो: फ्रान लेबोविट्ज रिडर (1994)। त्यही वर्ष उनले आफ्नो भर्खरको काम प्रस्तुत गरे, बच्चाहरूको लागि एउटा कथा भनिन्छ: श्री चास र लिसा सुले पाण्डाहरूलाई भेटे (1994)।
1994 मा उनको अन्तिम पुस्तक पछि, Lebowitz ले अक्षरहरूको दायरामा रचनात्मक ब्लकसँग व्यवहार गरेको छ। कयौं साहित्यिक परियोजना भए पनि उनले कुनै पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक डोमेन मा एक मामला उनको काम को हो धनको बाह्य चिन्ह, जुन लेखक द्वारा वर्षौं को लागी स्थगित गरिएको छ। 2004 मा, पत्रिका वैनिटी आफ्नो काम को एक संक्षिप्त प्रकाशित प्रगति, तर आजसम्म उसले त्यो पूरा गरेको छैन।
आफ्ना पुस्तकहरू र व्यंग्यात्मक हास्यका लागि प्रसिद्ध भए पनि, उनले सार्वजनिक भाषण जस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय रूपमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका छन्। वास्तवमा, लेबोविट्ज आज अमेरिकामा सबैभन्दा सम्मानित र खोजिने लेक्चररहरू मध्ये एक भएको छ। उनले यसबारे टिप्पणी गरेकी छिन्:
"यो त्यस्तो चीज हो जुन म बिना कुनै प्रयास गर्न सक्छु, यो जीवनमा मेरो अधिकतम। मसँग कुरा गर्न राम्रो समय छ, तर मलाई साँच्चिकै घृणा गर्ने एक मात्र कुरा साइटमा पुग्नु हो। विमानमा चढ्ने संसारका हरेक व्यक्तिले चेक प्राप्त गर्नुपर्छ। म विश्वास गर्न सक्दिन कि तिनीहरूले तपाईंलाई त्यो अनुभवको लागि चार्ज गर्छन्। ”
अडियोभिजुअल मिडियामा काम गर्नुहोस्
सात वर्षको लागि (2001-2007) शृङ्खलामा नियमित रूपमा सहभागी हुन्थ्यो कानून र व्यवस्था, न्यायाधीश जेनिस गोल्डबर्ग को चरित्र को रूप मा। थप रूपमा, उहाँ कोनन ओ'ब्रायन, जिमी फलोन र बिल माहेरसँग विभिन्न टक शोहरूमा देखा पर्नुभएको छ। 2013 मा उनी फिल्मको कलाकारको हिस्सा थिए वाल्फ स्ट्रीटको वुल्फमार्टिन स्कोरसेस द्वारा निर्देशित।
साथै, सहित धेरै वृत्तचित्रहरूमा उपस्थित भइसकेको छ अमेरिकी अनुभव, सुसान सोन्टागको सन्दर्भमा (2014) y Mapplethorpe: चित्रहरू हेर्नुहोस् (2016)। मार्टिन स्कोरसेसले लेबोविट्जमा एउटा डकुमेन्ट्री फिल्म पनि निर्देशन गरेका थिए एचबीओकल सार्वजनिक बोल्दै (2010).
२०२१ मा उनले वृत्तचित्रमा अभिनय गरे बहाना गर्नुहोस्, यो एक शहर हो, जसमा प्रिमियर भयो नेटफ्लिक्स प्लेटफर्म र6छोटो एपिसोडहरू छन्। यसको प्रसारण सुरु भएदेखि, यसले सयौं प्रशंसकहरू जितेको छ जो यस पागल चरित्रको बारेमा अनजान थिए, एकै समयमा curmudgeon र मजा। प्रत्येक एपिसोडमा, लेबोविट्जले निर्देशक मार्टिन स्कोरसेससँग न्यूयोर्कको हेडडेको बारेमा कुराकानी गरेका छन्।
कामको सफलता यही हो, कि एमी २०२१ को लागि उत्कृष्ट वृत्तचित्रको विधामा मनोनयन गरिएको थियो।
प्राविधिक प्रतिरोध र यात्रा
जसका लागि एउटा पक्ष हो द लेखक यो तिनीहरूको प्रविधिको अस्वीकारको कारण हो। त्यसैले उनीसँग न त सेलफोन छ न कम्प्युटर । यस सन्दर्भमा, उनले टिप्पणी गरे: "... मसँग कम्प्युटर छैन। म इन्टरनेटमा केहि देख्दिन, जुन आजको ठूलो निर्णय हो। ” साथै, आफूलाई हवाईजहाजमा चढ्न मन नपर्ने बताएको छ, त्यसैले ऊ विरलै छुट्टीमा जान्छ, किनकि उसले यसलाई भयानक गतिविधि ठान्छ।
Fran Lebowitz पुस्तकहरू
यो हास्य कथाहरूको संकलन हो। यो रूपमा स्पेनिश मा प्रकाशित भएको थियो महानगरीय जीवन (१९८४)। पाठमा, लेखकले न्यूयोर्कमा बसोबास गर्ने करोडपति, सुन्दर र प्रख्यातहरूको जीवन कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा एक उग्र इतिहास बनाए।। थप रूपमा, उनले विस्तारमा वर्णन गरे - विडम्बनापूर्ण स्पर्शको साथ - कसरी सामाजिक समूहहरू फेसन, कला र साहित्य जस्ता क्षेत्रमा विकास हुन्छ।
लेखकले एउटा वातावरण सुनाइन् जुन उनलाई पूर्ण रूपमा थाहा छ, किनकि उनी त्यो सर्कलको हिस्सा थिइन्। एउटा वास्तविकता जसले देखाउँछ कि कसरी सहरले यसका पात्रहरू समावेश गरेको थियो कि तिनीहरू मध्ये कोही पनि अर्को शहरमा बस्न सक्दैन, देशमा धेरै कम। तिनीहरू बीचको साझा कुरा प्रकृतिले घेरिएको ग्रामीण ठाउँहरू, घरपालुवा जनावरहरू, अशिक्षित मानिसहरू र बालबालिकाहरूप्रति शत्रुता थियो।
यो लेखकको दोस्रो पुस्तक हो। यो रूपमा स्पेनिश मा प्रकाशित भएको थियो सभ्यताको संक्षिप्त पुस्तिका (१९८४)। उनको अघिल्लो कामको लागि धन्यवाद, यो संग्रह राम्रोसँग प्राप्त भएको थियो र पनि थियो अत्यधिक बिक्री भएको। आफ्नो पहिलो काम जस्तै, यसमा कथाहरूको समूह समावेश छ जहाँ उनले शहरी क्षेत्रका मानिसहरू, आनन्द र वातावरणको बारेमा व्यंग्य गरेका छन्।
जबकि कथाहरू तिनीहरू एक चिन्हित कमेडीको आनन्द लिन्छन्, तिनीहरू सही रूपमा, बौद्धिक रूपमा, र गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएका छन्।
फ्रान लेबोविट्ज रिडर (1994)
यो तेस्रो साहित्यिक कृति हो उहाँको पहिलो दुई प्रकाशित पुस्तकहरूको संघको परिणाम हो, महानगरीय जीवन (1978) र सामाजिक अध्ययन (1981)। पाठहरूलाई डेटा समावेश गर्न सम्पादन गरिएको थियो जसले जनतालाई लेखकको जीवन र कामको बारेमा थप जान्न अनुमति दिन्छ। यस सामग्रीबाट पछि वृत्तचित्र उत्पन्न हुन्छ सार्वजनिक बोल्दै (2010), स्कोरसे द्वारा निर्देशित।
फ्रान लेबोविट्ज रिडर
श्री चास र लिसा सुले पाण्डाहरूलाई भेटे (1994)
यो बच्चाहरु को लागी एक काल्पनिक पुस्तक हो, जसमा दुई ठूला भालुहरु संग दुई साना7वर्ष को उमेर को यात्रा को वर्णन गर्दछ। लेखकले उनको विशिष्ट व्यंग्यात्मक कमेडीको साथ एउटा कथा प्रस्तुत गर्छिन्, जसमा मिस्टर चास र लिसा सु अभिनीत छन्। शिशुहरूले म्यानहट्टनमा भवनहरू अन्वेषण गर्दा, तिनीहरूले पाण्डाहरूको एक जोडी फेला पार्छन्: पाण्डेमोनियम र डन्ट पान्डा टु पब्लिक। काम मा माइकल ग्रेभ्स द्वारा चित्रण समावेश गर्दछ।
श्री चास र लिसा सु...
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » जीवनी » फ्रान लेबोईट्ज